Tariikh iyo Dardaran – convosfromwithin
Tariikh iyo Dardaran
Posted byMuni_Mar	 26. January 2020 27. January 2020
Salaligi saladaa oo laban so kuman ilmenin siduu yahay dhabti hooyadey?
Aan ku waramee walal horta barasho wanagsan, waxan ahay inaan dhalatay waa uu haradku yara jawiguna wacnaa. Lamane is jecel dhashodu sadaxad ban ahaa.
Imtixanka aduun inta eey hooyadeey so martay kolkan afar uqeybino, rubuc qeybtis ban aniguu so maray. Aan korka kaga maree, agoonimo iyo dhalan abaheed la diilo uguuma horeen. Qaax iyo dagaal iyo abaar so wada marnoo aniigu uguma horeen.
Dhalaan cadkeeda la goosto ugu ma horeen, sabr iyo imaan Alle ha inaga siyee. Luul iyo dhayman ka qimo badanti, Caishaba Ilyas ba soo tii la bobay cadkeedi la gostay naftana loo qudhiwayey…
Anigu naftan laiga ma qadinee inta aan isku dayay ama ku fikiiray iin aan aduunkan isdhafiiyo tiro maleh.
Mase yeline mudo ban jahwareray nafteydana lanolanshaheda kaded ugu ahayd.
Wayo ano yar ban ogaday naxaris daradaa aduunkan, ineey ku nool yihin dad Alle ka xishon, xolo eeyn laheen ku dhaarga, ubax so korayana xidika goya… Dhacaa iyo dhawacaa aay inoo geeysteen Dagal iyo hoolaac buu nafteena ka dhax shiday.
Ebaase raxmad badaano bogsiyay murayadi qalbigeygo cadkeygi go’ay igu badalay qalbi safi ah iyo cod katri leh.
Dharartan nafteyda uso labtayna saligi salada so kuman ilmayn sidu yahay dhabti hoyadey… Alhamdulilah cala kuli xaal…
Waxan kuso kobi warkeyga
dardaarankan, ta inaagu dhacday yeysan so labaniine ukaca dhalanka iyo xaqudqa haweenka.
Diinta xafidkedana ku darsada fahamkeedoo
100le qalbiga ka qudhmay ha ka xigsanina dadka. Ileen iblis xignansho iyo kolkolis tona mabadalan dabcigiisa waa kii akhirkisa dab kugu dhax tuura. 100le qudhmay ha inaga xigsaninee
Inoo istagaa oo kolkaan hadalno hana amusiiniina.
Aad nimco iyo nastiinyo waxay tahay ogataanee ad adeeg iyo xoog mahan awod wartaa, naxariistaa ka dhaadhan macaan aad nabad heshanee Soomalay wanaga badsadaa…
Posted byMuni_Mar 26. January 2020 27. January 2020 Posted inQoraalo af Somaali, the RobberyTags: #faceyourpast, løvetannbarn, qoraalafsoomali, rapesurvivor, speakuptoheal
How peace is born Visual poetry